Fiahiana ara-tsosialy : manampy ny ankizy sahirana ny Efajoro | NewsMada
Fiahiana ara-tsosialy : manampy ny ankizy sahirana ny Efajoro
Par Taratra sur 12/03/2016
« Anisan’ny asa sosialy efa nataonay ny fanohanana ny ankizy zanaky ny sahirana ary omena tombony manokana izy ireo amin’ny alalan’ny sakafo sy ny kojakojam-pianarana. Efa nahazo izany ny EPP ao Tsilazaina, Ambohijanaka », hoy ny filohan’ny fikambanana Efajoro, Razafimandimby Rija Ethel, omaly tetsy Ambatomitsangana. Nambarany fa tsy mijanona eo izany. Manampy sy manohana ireo ankizy mbola hanohy ny fianarana ny fikambanana, araka ny fanamafisany.
Ankoatra izany, efa nanamboatra lalana mirefy 5 km koa ny Efajoro, eny amin’ny kaominina Ambohijanaka ihany. Hitarina any amin’ny faritra koa anefa izao hetsika fanohanana sy fanampiana ny mpiara-belona ataon’izy ireo izao.
Vina hotanterahin’izy ireo amin’ity volana ity koa, ny fanomezana sakafo ireo mpianatra eto Antananarivo Renivohitra. Mbola lavitra ezaka, nefa tetikasan’ny fikambanana ny hanorina foibe ho an’ireo zaza sahirana sy tsy misy mpiahy.
Etsy andaniny, hitondra ny anjarany amin’ny fanampiana ireo any atsimon’ny Nosy tratry ny kere ny fikambanana Efajoro. Efa taratry ny fivelaran’izy ireo rahateo izany fa tsy mijanona eto Antananarivo ihany. « Anisan’ny tanjonay ny fanabeazana sy ny fampianarana miainga any ifotony. Ny famolavolana toetsaina mendrika ny soatoavina maha malagasy. Tsapanay fa ilaina averina izany amin’izao fotoana izao », hoy ihany izy.